Archive du 20190105
Kianjan’ny 13 mey Hanao rodobe ny vahoaka anio
Vao maraina dia efa rakotra mpitandro filaminana nirongo fiadiana nanakana ny hetsika am-pilaminana nokasain’ny K25 mitaky ny fahamarinana hatao.
Hentitra ny K3F “Aoka tsy hanaiky hobaikoana toy ny CENI ny HCC”
Nivoaka tao anatin’ny fahanginany ny K3F (Komitin’ny Fahamarimanana Fandriampahalemana Fiadanana) tarihin-dry Mompera Rakotomarivo Prosper, Radavidson Benjamin Andriamparany,… rehefa tsy dia re firy tao anatin’ny fotoana maharitra.
Vovonana RMTF « Tsy ekena ny filoham-pirenena lany amin’ny hosoka. »
Nanao fanambarana tetsy amin’ny foiben’ny antoko politika Otrikafo etsy Andravoahangy omaly ny vovonana politika RMTF na rodoben’ny Malagasy tia tanindrazana ho amin’ny fanorenana ifotony.
Fanehoan-kevitra sy famakafakana ara-politika Niditra an-tsehatra ny minisiteran’ny serasera
Nanao fanambarana ny governemanta tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana omaly.
Fanirisoa Ernaivo « Tokony hesorina io praiminisitra mitanila io »
Iray amin’ireo olona 7 notorian’ny fiadidian’ny primatiora i Fanirisoa Ernaivo, izay nambara fa manohintohina ny fiandrianam-pirenena. Namaly bontana izany izy omaly hoe :
Ekipan-dRajoelina Tsy misy sahy manamarina fa tsy nanao hosoka
“Tsy mahazaka resy”, “Tsy matoky tena”, “mpanao didy jadona”, sy ny maro hafa dia samy efa karazana fanaratsiana ataon’ireo ekipan’ny kandida ho filoham-pirenena laharana faha 13, Andry Rajoelina, ny kandida laharana faha 25, Marc Ravalomanana, avokoa.
Fifidianana filoham-pirenena Betsaka ny tandrevaky ny CENI
Nanao fanambarana niaraka tetsy Antanimena omaly zoma 04 janoary ny KMF CNOE fanabeazana olom-pirenena, ny liberty 32 ary ny “justice et paix”.
Pr James Ratsima “Tsy maninona raha ny filazana ny marina no hahafaty..”
Naneho ny heviny mikasika ny fitorian’ny primatiora azy fito mianadahy mitaky ny fahamarinana mikasika ny fifidianana omaly ny profesora James Ratsima, filohan’ny fikambanana Asandratro ny fireneko.
Demokrasia eto Madagasikara Tandindonin-doza …
« Omeko, tsy omeko » ! Izany no tsikaritra nandritra ny hetsika fitakiana ny rariny sy ny marina nandritra ny hetsika etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey.
NY MARINA NO AMPANDRESENA
Matahotra ve ny mpitsara Ny hamoaka ny vokatra marina , Ka dia kandidàn`ny mapara No amboarina fa hoe hakarina ?
Fahalalahana maneho hevitra Hotandindonin-doza atsy ho atsy
Hotandindonin-doza atsy ho atsy ny fahalalahana maneho hevitra. Tsikaritra io nandritra ny fitakiana ny rariny sy ny marina nandritra ny hetsika etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey.
Depioten’Ambositra Niharan-doza ny fiara nitondra azy
Niharan-doza ny fiara nitondra ny solombavambahoaka voafidy tany amin’ny distrikan’Ambositra Atoa Razakamady.
Ballon d'Or africain 2018 Amin’ny talata 8 janoary izao no ho fantatra
Any Dakar Sénégal amin’ny talata 8 janoary 2019 izaoo no hanoloran’ny CAF « Confédération africaine de football » ny fankasitrahana an’izay hahazo ny Ballon d’Or africain 2018.
Rallye Dakar andiany faha-41 Hanomboka any Pérou rahampitso alahady
Sambany amin’ity taona 2019 ity hotontosaina any amin’ny firenena tokana dia any Pérou ny fifaninanana Rallye Dakar izay hotontosaina ny 6-17 janoary 2019.
Sambo-balala mainandro !
Andro sisa isaina dia higadona ilay fotoana hamoahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny voka-pifidianana ofisialy.
Vao mainka nirongatra ny valanaretina pesta vao nanomboka ny fotoam-pahavaratra.
Hetsika fitakiana fahamarinana
Hanaovan’ireo mpanapa-kevitra momba ny hetsi-bahoaka omeko tsy omeko mihitsy hatramin’izao ny hetsika fitakiana fahamarinana tarihin’ny K 25 etsy amin’ny 13 mey.
Rano fisotro madio, fanadiovana ary fidiovana Tsy maintsy mila famatsiam-bola avy any ivelany
Hiatrika ny fihaonambe maneran-tany momba ny rano fisotro madio sy fidiovana any Costa Rica amin’ ny volana aprily ho avy izao ny minisiteran’ny rano hitondra ny fandaharan’asa PSEH na tetikasa momba ny fanadiovana,
Kaominina Ampitatafika Betsaka ny asa vita, maro ny mbola miandry
Betsaka ny asa vita tao amin’ny kaominina Ampitatafika, distrikan’Antananarivo Atsimondrano tamin’iny taona 2018 nivalona iny.
Banky mitsangana etsy sy eroa Midika ho fampandrosoana tokoa ve ?
Tato ato dia tsikaritra hatrany ny fitsanganan’ny banky, indrindra ireo lehibe (primaire), manerana ny faritra Analamanga eny fa erak’i Madagasikara mihitsy.